Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Abaalmarinnada K-Pop ee Indonesia ee ugu horreysay Hadda si toos ah u socota
Tokopedia, oo ah shirkad tignoolajiyadeed oo suuq ku leh Indonesia, ayaa ku dhawaaqday South Korea 10 kooxood oo caalami ah oo megastar-kooxeed safkeedii ugu horreeyay ee caalami ah abid WIB: Abaalmarinnada K-Pop ee Indonesia 25ka Noofambar 2021.
10-kan kooxood waa BTS iyo BLACKPINK, laba ka mid ah safiirada summadaha Tokopedia, iyo sidoo kale LABAB, NCT Dream, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Treasure, Secret Number, iyo Aespa.
WIB: Abaalmarinnada K-Pop ee Indonesia waa dhacdo abaal-marin ah oo ka timid bulshooyinka Indonesian ee kooxaha megastar-ka caalamiga ah ee aan soo sheegnay kuwaas oo taageerayaashooda ay u codeeyeen Tokopedia. Abaalmarinta K-pop ee WIB Indonesia 2021 waxay noqon doontaa bandhiggii ugu horreeyay ee abaal-marineed oo loo huray taageerayaasha K-pop ee Indonesia, waxayna sidoo kale soo bandhigi doontaa bandhigyo gaar ah oo kala duwan oo kooxaha.
Bulshooyinka aduunka oo dhami waxay soo gudbin karaan WIB: Indonesia K-Pop Awards 25ka Noofambar laga bilaabo 19.00 ilaa 21.00 Jakarta Time (UTC+7) iyagoo sii marinaya Tokopedia Play gudaha Tokopedia's app iyo Youtube channelka rasmiga ah ee Tokopedia. Taageerayaashu waxay bandhigga ka daawan karaan xiriirka soo socda waxaana lagu dhiirigelinayaa inay dejiyaan xasuusin si aysan u dhaafin bandhigga.
Ku lug lahaanshiyaha kooxaha megastar-ka caalamiga ah ee Koonfurta Kuuriya ee Tokopedia ololihii hore ee wax iibsiga ee Indonesia (Waktu Indonesia Belanja ama WIB) ayaa aad loo ammaanay, taasoo kicisay wada sheekaysiga warbaahinta bulshada xitaa sare u kaca mawduucyada isbeddelka adduunka.
Ololaha WIB ee Tokopedia waxa si caadi ah loo qabtaa 25-ka ilaa dhammaadka bil kasta. Indooniisiyaanka waxay heli karaan badeecooyin kala duwan oo wata dalabyo soo jiidasho leh oo kala duwan si ay dukaamaysiga uga dhigaan mid hufan.